ကြည့်လိုတဲ့ ဘာသာစကားကို ပြောင်းပါ
နားဆင်စရာ ကျမ်းစာ ဇာတ်လမ်း
ရုံးများနဲ့ လည်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်များ
ကင်းမျှော်စင် | အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
ဖတ်လို ခရိုအေးရှား ဂျာမန် စီဘွာနို ဒတ်ချ် နော်ဝေ ပေါ်တူဂီ ဘိုင်ကိုးလ် မြန်မာ ရိုမေးနီးယား လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား ဟီလီဂေနွန် အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ်
မေရှိယနှင့်ပတ်သက်၍ ဟေရှာယနှင့်အခြားပရောဖက်များ ရေးသားခဲ့ရာကို သိရှိထားသော ဂျူးလူမျိုးတို့သည် မေရှိယကြွလာမည်ကို ကြာမြင့်စွာကပင် စောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်မှာ၊ ယေရှုလက်ထက်တွင် ဂျူးများစွာသည် ပေါ်ထွန်းတော့မည့်မေရှိယကို “မျှော်လင့်” နေကြသည်။ (လုကာ ၃:၁၅) ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်များတွင် မေရှိယ၏ဘဝနှင့်ဆိုင်သော ထူးခြားသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်မှာ မှတ်သားဖွယ်ပင်။ မည်သည့်လူသားမျှ ထိုဖြစ်ရပ်များကို ကြိုမဟောနိုင်သကဲ့သို့ ယေရှုဘဝတွင် ယင်းတို့အားလုံးဖြစ်ပျက်လာစေရန် စီစဉ်နိုင်မည်လည်း မဟုတ်ပေ။
မေရှိယမွေးဖွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ မေရှိယ သို့မဟုတ် ခရစ်တော်သည် အပျိုကညာမှ ဖွားမြင်လာမည်ဟု ဟေရှာယကြိုဟောခဲ့သည်။ တမန်တော်မဿဲသည် ယေရှုမွေးဖွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အံ့ဖွယ်အခြင်းအရာများအကြောင်း ဖော်ပြပြီးနောက် ဤသို့ရေးခဲ့သည်– ‘ပရောဖက်အားဖြင့် ယေဟောဝါဘုရားသခင်ဆင့်ဆိုသည့် ဤစကားပြည့်စုံလာ၏။ “အပျိုကညာသည် ကိုယ်ဝန်ရှိ၍ သားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။”’ (မဿဲ ၁:၂၂၊ ၂၃၊ ကဘ; ဟေရှာယ ၇:၁၄) ထို့ပြင် ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်မှဆင်းသက်လာမည်ဟု ဟေရှာယကြိုဟော ပြီး ဒါဝိဒ်၏ဖခင် ယေရှဲဟူသောအမည်ကိုပင် တိတိကျကျဖော်ပြခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ဒါဝိဒ်မျိုးဆက်မှ အမှန်ပင် ဆင်းသက်လာသည်။ (မဿဲ ၁:၆၊ ၁၆; လုကာ ၃:၂၃၊ ၃၁၊ ၃၂) ထို့ကြောင့် “သူ့အဘဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ကို ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည် သူ့အား ပေးတော်မူမည်” ဟုယေရှုမမွေးဖွားမီ မိခင်မာရိကို ကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလ ဆိုခဲ့သည်။—လုကာ ၁:၃၂၊ ၃၃; ဟေရှာယ ၁၁:၁-၅၊ ၁၀; ရောမ ၁၅:၁၂။
မေရှိယ၏ဘဝနှင့်ဆိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ယေရှုသည် နာဇရက်မြို့ရှိတရားဇရပ်၌ ဟေရှာယ၏ပရောဖက်ပြုချက်ကို ဖတ်ပြခဲ့ရာ ‘ထာဝရဘုရားသခင်၏ စွမ်းအားတော်သည် ငါ့အပေါ်၌တည်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဆင်းရဲသားတို့အား ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို ကြားပြောစေခြင်းငှာ ငါ့ကိုဘိသိက်ပေးတော်မူပြီ’ ဟူသောစကားများပါဝင်သည်။ ထို့နောက် “ယနေ့ပင် ဤကျမ်းစာချက်သည် သင်တို့ကြားသည်အတိုင်း ပြည့်စုံလေပြီ” ဟုဆိုခြင်းဖြင့် ထိုပရောဖက်ပြုချက်သည် မိမိ၌ပြည့်စုံကြောင်း ယေရှုဖော်ပြခဲ့သည်။ (လုကာ ၄:၁၇-၂၁; ဟေရှာယ ၆၁:၁၊ ၂) ကုသမှုလိုအပ်နေသူများနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် ယေရှု၏ ကြင်နာမှု၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု၊ နှိမ့်ချမှုတို့ကိုလည်း ဟေရှာယကြိုဟောခဲ့သည်။ မဿဲဤသို့ရေးခဲ့၏– “များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည် နောက်တော်သို့လိုက်ကြသဖြင့် သူတို့၏အနာရောဂါရှိသမျှတို့ကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏။ ထိုသူတို့သည် သတင်းတော်ကိုမဖွင့်ရမည်အကြောင်း ပညတ်တော်မူ၏။ ထိုအကြောင်းအရာကား၊ ပရောဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ထွက် ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်း။ . . . ‘သူသည် . . . ငြင်းခုံခြင်း၊ ဟစ်ကြော်ခြင်းကိုမပြု၊ . . . နင်းနယ်လျက်ရှိသောကျူပင်ကိုမချိုး။’”—မဿဲ ၈:၁၆၊ ၁၇; ၁၂:၁၀-၂၁; ဟေရှာယ ၄၂:၁-၄; ၅၃:၄၊ ၅။
မေရှိယ၏ဝေဒနာနှင့်ဆိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ဣသရေလလူအများစုသည် မေရှိယကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ဘဲ သူတို့အတွက် “ထိမိ၍လဲစရာကျောက်” ဖြစ်လာမည်ဟု ဟေရှာယပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ (၁ ပေတရု ၂:၆-၈; ဟေရှာယ ၈:၁၄၊ ၁၅) ယေရှုသည် အံ့ဖွယ်အမှုများစွာလုပ်ဆောင်သော်လည်း လူတို့သည် ‘ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်ကြ။ ပရောဖက်ဟေရှာယ ဟောဖူးသည်ကား “အိုထာဝရဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံပါသနည်း” . . . ဟူသောစကားသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သတည်း။’ (ယောဟန် ၁၂:၃၇၊ ၃၈; ဟေရှာယ ၅၃:၁) မေရှိယသည် ရောမတို့၏အုပ်ချုပ်မှုကို ချက်ချင်းဖယ်ရှား၍ ဒါဝိဒ်မင်းဆက်၏နိုင်ငံတော်ကို မြေကြီးပေါ်တွင် ပြန်လည်တည်ထောင်ပေးမည်ဟူသော မှားယွင်းသည့်ယုံကြည်ချက်ကို ဂျူးများစွာလက်ခံထားသောကြောင့် ယေရှုကို မေရှိယအဖြစ် မယုံကြည်ကြပေ။ ယေရှုသည် ဝေဒနာခံစားကာ သေဆုံးခဲ့ရသည့်အတွက် ဂျူးအများစုမှာ ကိုယ်တော်အား မေရှိယအဖြစ် လက်မခံနိုင်ကြပေ။ အမှန်မှာ၊ မေရှိယသည် ဘုရင် မဖြစ်လာမီ ဆင်းရဲဝေဒနာခံစားရမည်ကို ဟေရှာယကြိုဟောခဲ့သည်။
ဟေရှာယကျမ်းတွင် မေရှိယနှင့်ပတ်သက်၍ ဤသို့ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်– “ရိုက်သောသူတို့အား ငါ့ကျောကို . . . ငါအပ်၏။ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့်တံတွေးထွေးခြင်းမှ ငါသည် ကိုယ်မျက်နှာကိုမလွှဲ။” ယေရှု မေးမြန်းစစ်ဆေးခံရချိန်တွင် “[သူတို့သည်] မျက်နှာတော်ကို တံတွေးနှင့်ထွေးကြ၏။ လက်သီးနှင့်ထိုးကြ၏။ အချို့တို့သည်လည်း ပါးတော်ကို လက်နှင့်ပုတ်” ကြ၏ဟု မဿဲရေးခဲ့သည်။ (ဟေရှာယ ၅၀:၆; မဿဲ ၂၆:၆၇၊ ၆၈) “ထိုသူသည် . . . နှိမ့်ချခြင်းကိုခံ၍ နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏” ဟုဟေရှာယရေးခဲ့သည်။ ဂျူးတို့၏စွပ်စွဲချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပိလတ်မင်းမေးမြန်းသောအခါ ယေရှုသည် “စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ ပြန်ပြောတော်မမူသည်ကို မြို့ဝန်မင်းသည် အလွန်အံ့သြလေ၏။”—ဟေရှာယ ၅၃:၇; မဿဲ ၂၇:၁၂-၁၄; တမန်တော် ၈:၂၈၊ ၃၂-၃၅။
မေရှိယသေဆုံးခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ဟေရှာယ၏ပရောဖက်ပြုချက်သည် ယေရှုသေဆုံးချိန်နှင့် ယင်းနောက်ပိုင်းတွင်ပင် ဆက်၍ပြည့်စုံခဲ့သည်။ “[ကိုယ်တော်ကို] လူဆိုးတို့နှင့်အတူ မြေမြှုပ်ခြင်းငှာ စီရင်ကြ၏။ သို့ရာတွင် သေပြီးမှ သူဌေး၌ရှိ၏” ဟုဟေရှာယကြိုဟောသည်။ (ဟေရှာယ ၅၃:၉) ရှေ့နောက်မညီဟန်ရှိသော ထိုပရောဖက်ပြုချက်သည် မည်သို့ပြည့်စုံနိုင်မည်နည်း။ ယေရှုသည် ဓားပြနှစ်ဦးကြားတွင် နှက်တိုင်တင်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ (မဿဲ ၂၇:၃၈) သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် အရိမသဲမြို့သား သူဌေးယောသပ်သည် ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုယူ၍ မိမိသင်္ချိုင်းတွင်းသစ်ထဲမှာ ထားလေ၏။ (မဿဲ ၂၇:၅၇-၆၀) နောက်ဆုံး၊ ယေရှု၏သေခြင်းကြောင့် ဟေရှာယပရောဖက်ပြုချက်မှ အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍတစ်ခု ပြည့်စုံခဲ့သည်။ မေရှိယနှင့်ပတ်သက်၍ ဟေရှာယဤသို့ဆိုသည်– “ထိုဖြောင့်မတ် သော ငါ၏ကျွန်ကို သိကျွမ်းခြင်းအားဖြင့် သူသည် အများသောသူတို့ကို ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေလိမ့်မည်။ သူတို့၏အပြစ်ကို ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရ၏။” အမှန်ပင်၊ ယေရှု၏သေခြင်းက ရွေးနုတ်ဖိုးကိုပေးခဲ့ရာ သစ္စာရှိသူအားလုံး အပြစ်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြပြီ။—ဟေရှာယ ၅၃:၈၊ ၁၁; ရောမ ၄:၂၅။
တမန်တော်များနှင့်ယေရှုကိုယ်တိုင်သည် ကျမ်းစာအဆိုနှင့်ကိုက်ညီသောမေရှိယကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန် ဟေရှာယကျမ်းကို အခြားကျမ်းစာစောင်များထက် မကြာခဏကိုးကားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဟေရှာယကျမ်းသည် အနာဂတ်အကြောင်း ကြိုဟောသည့် တစ်ခုတည်းသောကျမ်းမဟုတ်ပါ။ ယေရှု၊ ကိုယ်တော့်နိုင်ငံတော်၊ ထိုနိုင်ငံတော်က အနာဂတ်တွင်လုပ်ဆောင်ပေးမည့် ကောင်းကျိုးများနှင့်ပတ်သက်သော ဟေဗြဲကျမ်းစောင်မှ အခြားပရောဖက်ပြုချက်များစွာလည်း ပြည့်စုံလျက်ရှိသည်။ * (တမန်တော် ၂၈:၂၃; ဗျာ. ၁၉:၁၀) ထိုပရောဖက်ပြုချက်များ ပြည့်စုံမည်မှာ မည်မျှသေချာသနည်း။ ယေရှုသည် ဂျူးတို့ကို ဤသို့ဆိုသည်– “ပညတ္တိကျမ်း၊ အနာဂတ္တိကျမ်းများ [ဟေဗြဲကျမ်းစောင်များ] ကို ဖျက်ပယ်ခြင်းငှာ ငါလာသည်ဟု မထင်ကြနှင့်။ ဖျက်ပယ်ခြင်းငှာ ငါလာသည်မဟုတ်။ ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ ငါလာသတည်း။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး မပျက်စီးမီတိုင်အောင် ပညတ္တိကျမ်း၌ အငယ်ဆုံးသောစာလုံး ဗိန္ဓုတစ်လုံးမျှ ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီ မပျက်စီးရ။”—မဿဲ ၅:၁၇၊ ၁၈။
ယေရှုသည် မိမိနှင့် အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များအကြောင်း ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်များ၏ ပြည့်စုံမှုကိုလည်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ (ဒံယေလ ၉:၂၇; မဿဲ ၁၅:၇-၉; ၂၄:၁၅) ထို့ပြင် ယေရှုနှင့်တပည့်များသည် ၎င်းတို့ခေတ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပျက်မည့်အရာများအပြင် ယနေ့ခေတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသော ဖြစ်ရပ်များစွာကို ကြိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းတို့နှင့် အနာဂတ်တွင်ပြည့်စုံမည့် အခြားကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်များကို နောက်ဆောင်းပါးတွင် သုံးသပ်သွားပါမည်။
^ အပိုဒ်၊9ယေရှုတွင်ပြည့်စုံခဲ့သော ပရောဖက်ပြုချက်များဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ယေဟောဝါသက်သေများထုတ်ဝေသော သမ္မာကျမ်းစာ အမှန်တကယ်သွန်သင်ရာမှာ အဘယ်နည်းစာအုပ် စာမျက်နှာ ၂၀၀ တွင်ကြည့်ပါ။
[စာမျက်နှာ ၄ပါ ပုံ]
“အပျိုကညာသည် . . . သားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်”
[စာမျက်နှာ ၅ ပါပုံ]
‘အရှက်ခွဲခြင်းမှ ငါသည် ကိုယ်မျက်နှာကို မလွှဲ’
w08 - 2008-10-01
သတင်းကောင်းကျမ်းများသည် မည်မျှ စိတ်ချအားထားရသနည်း
ကလေးတွေကို သင်ပေးပါ ယောသပ်ရဲ့အစ်ကိုတွေ မနာလိုစိတ် ရှိခဲ့ကြတယ်။ ကလေးတို့ကော
သူ “စဉ်းစားဆင်ခြင်” ခဲ့
အာဒံသည် စုံလင်သူဖြစ်ပါက မည်သို့ အပြစ်ပြုနိုင်ပါမည်နည်း
ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးများကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် ကျွန်မယုံကြည်ခြင်းက ကူညီပေးပုံ
စာသား ဒီဂျစ်တယ် စာပေများကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ
ကင်းမျှော်စင် အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
JW.ORG / ယေဟောဝါသက်သေများရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
ဆရာဝန်တွေအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
Copyright © 2019 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများ | ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ